मृत चितुवा पोष्टमार्टम पछी वन कार्यालय परिसर मै गाडीयो | दिशानिर्देश कञ्चन साप्ताहिक
मृत चितुवा पोष्टमार्टम पछी वन कार्यालय परिसर मै गाडीयो
अछाम, ०३ भाद्र । प्राप्त जानकारी अनुसार अछामको साँफेबगर नगरपालिका वडा नम्बर–८ बयलपाटामा मृत अवस्थामा चितुवा फेला परेको छ ।
शुक्रबार बिहान ७ बजे स्थानीयले मृत अवस्थामा चितुवालाई देखेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय बयलपाटालाई खबर गरेका थिए । स्थानीयको रोहवरमा मुचुल्का बनाइ बयलपाटामा रहेको इलाका वन कार्यालयका कर्मचारीहरु र प्रहरीको टोलीले सो चितुवालाई जिल्ला वन कार्यालय मंगलसेन र्पुयाएका थिए ।
जिल्ला पशुसेवा कार्यालयमा पोस्टमार्टम गर्दा गोली लागेर चितुवाको मृत्यु भएको पाइएको बताइएको छ । जिल्ला पशुसेवा कार्यालय अछामका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. वेदप्रसाद भट्ट, डा. बीपी खनाल र पशु स्वास्थ्य प्राविधिक नेत्र कठायतको टोलीले उक्त चितुवाको पोस्टमार्टम गरेका थिए ।
चितुवाको टाउकोमा गोली लागेको डा. भट्टले बताए । ६४ इन्च लम्बाई र २२ इन्च उचाइ भएको सो चितुवाको महत्वपूर्ण अंगहरु छाला, दाँत, नग्रा र जुंगासहितका सबै अंगहरु भने शरीरमै भेटिएका निमित्त जिल्ला वन अधिकृत विकास शर्माले जानकारी दिए ।
पोस्टमार्टमपछि मृत चितुवालाई जिल्ला वन कार्यालयको प्रांगणमा खाल्डो खनेर गाडिएको छ । चितुवालाई गोली हान्ने व्यक्तिहरुको खोजी भइरहेको बताइएको छ ।
वन्यजन्तुलाई नचिन्ने व्यक्तिहरु अझै नेपालमा मौजुद छन् । उनी कारवाही भन्दा पनि आपराधिक क्रियाकलाप कम गर्न नेपालको वन्यजन्तु इतिहास तथा राष्ट्रको इतिहासको बरोमा ज्ञान दिलाउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ ।
← चन्दलाई अध्यक्ष बनाउन दवाव !
नदी नियन्त्रण गर्न संघर्ष समिति गठन →